Q-17aad taxanaha adeegto – dhugasho
maxamedsheekafguun Diseembar 25, 2020 sheekooyin
Q-17aad taxanaha adeegto
Maryan waxay sinaba u keeni wayday waxa khamradu ka samaysan tahay. Waxay kaloo ka xishootay inay dadka weydiiso su’aalahaas sababtoo ah waxay is lahayd, reer baadiyaa tahayoo waa lagula yaabayaa haddaad weydiisid. Marar aan yarayn bay uga gabbatay sida suâ€™aalo badanoo loo baahanaa inay ka faaâ€™iideysato. Wax kasta waxy ku deysaneysay in iyadoo kaliyihi ka soo hor ka laabato waxyaallahaas. Dadka kale sheekaysanaya aad bay ugu kuu geli jirtay si ay uga hesho aqoonay dooneysee magaalo. Hadal- ladu markay soo galaan dhanka baadiye intay aamusnaan weydo ayay seefteeda galka ka soo saarta lana qabsataa dadka. Waxa ugu yaab badnaa markay aragto naag diric qabtee rag dhex mushaax- aysa. Intay hareeraha eegto bay u malaysaa danbiga in iyadu gashay.
Laga soo bilaabo maalintay dhaawicii shaaha kulul gaarsiiyey ka biskootay way shaqaynaysay iyadoo hor ahaantii aad u jeclaysa- naysay inay soo adeegto. Reerka Maryan shaqo gashaday waa xaas aad u ballaaran oo isku raran ah, ubad gabdho u badanna leh. Waxaa jooga dad xidid ahee isku xil leh iyo kuwo marwadadhashay marna is dhalay oo haddana la oran karo waa isku dhaxaan ama xididnimaa ka dhexeysa.
Haweenaydii soo heshay dhan waa ka soddoh gabadheeda la qabo, dhan waa ka xaas min weyn leh. Dhammaan dadyowgaa wax isu ahi isku goob bay ku soo wada dheelmadaan. Guriga lagu jiraa sidaa uma dhisma wacna, ha yeeshee waaqolal badnaa. Hawsha ka iman karaysaa reer intaa leâ€™eg waa mid muuqata inay dhibyaraan ka taggan tahay.
Maryan oo dhammaan loo wada arkay inay tahay dhoocii xunee iyadoo baadi ah cidla laga helay looguna manno sheeganayo sidii loo canshey ayaa lagu bilaabay shaqo aan kala goâ€™ lahayne waqti kasta joogta.
Suuqa waa laga soo adeegaa, dukaammada sonkoriyo shaaha iyo wixii kale e laga doonayaa kala goâ€™ ma leh, weelka iyo dharka si joogto ah ayaa loo dhaqaa, xaaqidda iyo tirtirka guriga iyana waa joogto, carruur yaryaroo mar saxara laga tirayo mar loo qubeynayo marna la aamusinayaa iyana waa halkooda. Waxaa intaa dheeraa ilmaha reerka oo badani siday toos ahaan u adeegsan jireen oy u oran jireen nacnac, buufin iyo wax la mid ah ii soo gad; Maryan intay weliba lacagtay u dhiibayaan faraba uma saaraane agteeda ku soo sayraan.
Dadku waqtiyada hurdada, shaqada iyo nasashadu way u qaybsan yihiin, Maryanse dhammaan waqtigeedii shaquu noqday. Laga yaabee inay 24kii saace maalintu lahayd shaqayso 18 saac iyo ka badan iyadoon loo ogeyn dnibta haysata.
Maryan dharka la siiyaa waa canbuur xunee habeen iyo dha- raarba loogu manna sheegto. Kabo weligeed ma xiran. Madaxeed- ana huâ€™ may saarin. Sansaamaha gabarnimo kama soo daahirin, inkastoy inan tahay, weliba inta jirkeedu bisaylka naagnimo lagu yiqiin muujiyey ragga qaar golleheeda ilqooreedda ka eego kaddib markay iyadoo meelahaa rasane cambuur kilkilooyinka iyo laabta
ka dillaacsan qabta weel dhaqid iyo dhul xaaqid la legdameyso. lyadu is aragtay in wax laabteeda ku soo kordheen, maalinba maal- inta ka dambaysana ay soo foocayeen manay moogeyn magacood- iyo micnahooda, ha yeeshee, umay jeclayn umana kookoolineyn sida kuwa iyada la midka ahee gurigay ka shaqayso u dhashaye iyagu bisha ku raadinaya soo bixiddiisa (Naaska) iyo korintiisa. Fareheeda ugama duwaneyn hadduusan hawl dheeraad ah kuba kordhin oo cambuurkii buuba ka yareeyay.
Maryan iyadoo awalba hagaas ka ahayd xagga jirka caato laga wareerayna haysey ayay haddana hawshii badnayd xanaano xuma- dii qabsatay darteed hagaastay. Meel ay ka korranayd waxaa jirtay, baad mooddey, dhanka lafta oy mar kastaba sii kala baxaysay.
Cuntadeedu lufluf iyo hambaysi wax la nacay ah bay ahayd. Digsi ay xagato, halal bariisa oosaxan ku haray, gongon shaaha, jab rooti ah amagabal canjeelo ahee dhulka laga sooqaaday iyowaxla mid ah bay ku nooleyd.
AUN Xuseen Dhiqle